FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISilozi ISpanish Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAymara IsiBhulu IsiBulgarian IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiChitumbuka IsiCibemba IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGrike IsiGuarani IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKazakh IsiKikaonde IsiKikuyu IsiKiluba IsiKimbundu IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKisonge IsiKongo IsiKorea IsiLingala IsiLithuania IsiLuganda IsiLuo IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMaltese IsiMaya IsiMoore IsiMyanmar IsiNepali IsiNgabere IsiNgesi IsiNorway IsiNyaneka IsiNzema IsiOssetia IsiPapiamento (saseAruba) IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPersi IsiPhuthukezi IsiPolish IsiPunjabi IsiQuechua (saseBolivia) IsiRashiya IsiRomania IsiSango IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwahili (saseCongo) IsiSwedish IsiTagalog IsiTatar IsiThai IsiTigrinya IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTshiluba IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiUkrainian IsiUmbundu IsiUzbek IsiVietnam IsiXhosa IsiYoruba IsiZande IsiZulu isi-Igbo
ABAKHENKETHI ababetyelele kwindawo eyayikuyo iBhetelehem yamandulo babekhatywe kanobom linxele likaKhetsekile, yaye bezimisele ukuzifikisela ekutyeni kwalapho. Omnye wabo wathi ntla ngevenkile yokutyela ethengisa ifalafel, esisonka esibizwa ngokuba yipita bread esinee-ertyisi, ezidityaniswe netumato, itswele, neminye imifuno. Emva kokufuman’ oku kutya kumuncis’ iintupha, aba bakhenkethi batsho banamandla okuqhubeka nohambo lwabo.
Bengaqondanga abo bakhenkethi, kwathi kanti ukutya eso sonka kuyeyona nxalenye ibalulekileyo yokhenketho lwabo ngolo suku lokukhangela izinto zembali. Igama elithi Bhetelehem lithetha “Indlu Yesonka,” yaye isonka sinembali yamawaka eminyaka kweso sixeko. (Rute 1:22; 2:14) Namhlanje ipita bread sesona sonka sithandwayo eBhetelehem.
Malunga namawaka amane eminyaka eyadlulayo, umfazi ka-Abraham uSara, owayehlala kufutshane neBhetelehem, wabhaka “amaqebengwana” okondla iindwendwe ezintathu awayengazilindelanga. (Genesis 18:6) ‘Umgubo ocolekileyo’ awawusebenzisayo uSara, usenokuba wawenziwe ngengqolowa okanye irhasi. Kwafuneka axove ngokukhawuleza, yaye kusenokwenzeka ukuba wayibhaka le ntlama ngokuyibeka phezu kwamatye ashushu.—1 Kumkani 19:6.
Oku kubonisa ukuba intsapho ka-Abraham yayizibhakela isonka sayo. Njengoko babengoonothwal’ impahlana, uSara nezicaka zakhe babengenazo izitovu zokubhaka njengaseUre, apho babesuka khona. Wayesenza umgubo ocolekileyo ngeenkozo. Oku kuthetha ukuba wayebila esoma ewucola kwilitye lokuguba okanye kwisingqusho.
Kumakhulu amane eminyaka kamva, uMthetho kaMoses wayalela ukuba ilitye lokusila lomntu oboleke imali lingathathwa njengesibambiso, kuba “kukuthimba umphefumlo” oko. (Duteronomi 24:6) UThixo wayelijonga njengento ebalulekileyo ilitye lokusila, kuba intsapho yayingenakukwazi ukwenza isonka semihla ngemihla ngaphandle kwalo.—Funda ibhokisi ethi “ Ukusila Nokubhaka Kumaxesha Okubhalwa KweBhayibhile.”
ISONKA SOKUXHASA INTLIZIYO YOMNTU OFAYO
IZibhalo zithetha ngesonka kangangezihlandlo eziyi-350, yaye ababhali beBhayibhile badla ngokuthetha ngaso xa bebhekisela ekutyeni. UYesu wafundisa abo bathanda uThixo ukuba bathandaze bathi: “Siphe namhlanje isonka sethu sale mini.” (Mateyu 6:11) Xa esithi “isonka” wayebhekisela ekutyeni ngokubanzi, yaye wayetheth’ ukuthi sinokuqiniseka ukuba uThixo uya kusondla imihla ngemihla.—INdumiso 37:25.
Noko ke, kukho into ebaluleke ngaphezu kwesonka, okanye ukutya. UYesu wathi: “Akaphili ngasonka sodwa umntu, uphila ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaYehova.” (Mateyu 4:4) Wayebhekisela kwixesha laxa amaSirayeli ayexhomekeke ngokupheleleyo kukutya okuvela kuThixo. Oku kwenzeka kwixesha elifutshane emva kokuba ephumile eYiputa. Ayesele enexesha elingangenyanga engenile kwiNtlango yeSinayi, ibe ayephelelwa kukutya. Enexhala lokuba aza kufa yindlala kuloo ntlango, ambombozela athi: ‘Sasisidla isonka sanele’ eYiputa.—Eksodus 16:1-3.
Ayithandabuzeki into yokuba isonka saseYiputa sasimnandi. Ngomhla kaMoses, oompondo zihlanjiwe bababhaki babebhakela amaYiputa iintlobo ngeentlobo zezonka namaqebengwana. Kodwa ke uYehova wayefuna nabantu bakhe babe nesonka. Wabathembisa oku: “Uyabona, ndiya kuninisela isonka esivela emazulwini.” Kanye njengokuba uThixo wayetshilo, ngonyezi kwehla isonka esivela ezulwini, esasinjengento “ejiyileyo necolekileyo” efana neqabaka. Ukuqala kwawo ukuyibona, amaSirayeli abuza athi: “Yintoni le?” UMoses wawaphendula wathi: “Sisonka aninike sona uYehova ukuba nisidle.” Asibiza ngokuba yimana, * ibe asitya iminyaka eyi-40.—Eksodus 16:4, 13-15, 31.
Kumele ukuba amaSirayeli ayeyinandipha le mana ekuqaleni. “Incasa yayo yayinjengaleyo yamaqebengwana amcaba obusi,” ibe yayingumdliva. (Eksodus 16:18) Kodwa ekuhambeni kwexesha, akhumbula ukutya kwaseYiputa. Akhalaza athi: “Amehlo ethu awaboni nto yimbi ngaphandle kwale mana.” (Numeri 11:6) Kamva aba lugcwabevu ngumsindo athi: “Umphefumlo wethu uyasenyanya esi sonka sinkatshunkatshu.” (Numeri 21:5) Ekugqibeleni asicaphukela esi ‘sonka sivela ezulwini.’—INdumiso 105:40.
Abantu abaninzi basithatha njengento engenamsebenzi isonka. Kodwa iBhayibhile ithetha ngesona sonka sixabisekileyo esingamele sijongelwe phantsi. UYesu esi sonka usithelekisa nemana amaSirayeli angazange ayixabise, kodwa sinokuzuza lukhulu kuso.
UYesu wathi: “Ndim isonka sobomi. Ookhokho benu batya imana entlango ukanti bafa. Siso esi isonka esihla sivela ezulwini, ukuze nabani na atye kuso aze angafi. Ndim isonka esiphilayo esehla sivela ezulwini; ukuba nabani na utya kwesi sonka uya kuphila ngonaphakade; yaye, enyanisweni, isonka endiya kusinikela yinyama yam ngenxa yobomi behlabathi.”—Yohane 6:48-51.
AmaYuda amaninzi awayephulaphule ayengaqondi ukuba wayethetha ukuthini uYesu xa ethetha ‘ngesonka nenyama.’ Kodwa lo mzekelo wawungena gingci, kuba amaYuda ayesitya yonke le mihla isonka, njengokuba namaSirayeli atya imana kangangeminyaka eyi-40 entlango. Nangona imana yayisisipho esivela kuThixo, ayizange ibanike ubomi obungunaphakade abo babeyitya. Kodwa kona ukusifela kukaYesu, kubazisela ubomi obungunaphakade abo babonisa ukholo kuye. Wayenyanisile xa esithi “ndim isonka sobomi.”
Mhlawumbi xa uziva ulambile, uya ubaleka esonkeni. Yaye uye umbulele uThixo ‘ngesonka semihla ngemihla.’ (Mateyu 6:11) Njengoko sikuxabisa ukufumana isonka esimnandi, masihlale sikukhumbula ukubaluleka kukaYesu Kristu “isonka sobomi”.
Ngokungafaniyo namaSirayeli awayephila ngomhla kaMoses, singabonisa njani ukuba asisideleli esi sonka sesisa? “Ukuba niyandithanda, niya kuyigcina imiyalelo yam; “ watsho njalo uYesu (Yohane 14:15) Ngokugcina imiyalelo kaYesu, siya kukwazi ukuziyolisa ngokutya isonka sikanaphakade.—Duteronomi 12:7.
^ isiqe. 10 Igama elithi “mana” lisenokuba lithathwe kwelesiHebhere elithi “man hu’?” elithetha ukuba “yintoni le?”
Ukusila Nokubhaka Kumaxesha Okubhalwa KweBhayibhile
Ukucola umgubo wokubhaka. Omnye wemisebenzi eyayisenziwa ngenj’ ixukuxa ngamabhinqa amandulo yayikukusila ngesandla umgubo wokubhaka. (IMizekeliso 31:15; Mateyu 24:41) Ayesebenzisa uhlobo oluthile lwengqolowa eneenkozo ekwakunzima ukuzahlukanisa namakhatshu. Lo yayingumsebenzi onzima, owawufuna kusilelwe kwisingqusho okanye kwilitye lokuguba. Kwakufuneka ingqolowa leyo imanziswe, isilwe, ize yomiswe elangeni. Kamva yayisefwa ukuze kukhetheke iinkozo ngaphambi kokuba igutywe.
Ukwenza umgubo owanele intsapho yonke kwakuthatha ixesha elide, kwaye isandi “selitye lokuguba” sasiqhelekile kumaxesha okubhalwa kweBhayibhile. (Yeremiya 25:10) Ekuhambeni kwexesha abafazi bayeka ukuguba kwaza kwasetyenziswa amatye amakhulu okuguba awayejikeleziswa zizilwanyana.—Mateyu 18:6.
Ukubhaka isonka. Emva kokwenziwa komgubo abafazi babexova intlama baze babhake isonka. (Genesis 18:6) Esi sonka babesibhaka ngokusibeka phezu kwamatye ashushu; kanti abanye babesebenzisa izitovu. (Levitikus 2:4; Isaya 44:15) Abantu ababalulekiyo njengooFaro, babesenzelwa ngababhaki bokwenene isonka, kodwa kwiminyaka yamva nabanye abantu abaqhelekileyo babesithenga esi sonka. (Genesis 40:17; 1 Samuweli 8:13; Isaya 55:2) IYerusalem ‘yayinesitrato sababhaki’ ngexesha likaYeremiya, yaye enye yeenqaba zayo yayibizwa ngokuba ‘yiNqaba yeZiko Lokosa’ ngexesha likaNehemiya.—Yeremiya 37:21; Nehemiya 12:38.